बाम एकताः एकीकृत पार्टीमा कस्तो हुन्छ दुई अध्यक्षको हैसियत ? | Rajmarga
बाम एकताः एकीकृत पार्टीमा कस्तो हुन्छ दुई अध्यक्षको हैसियत ?
काठमाडौ । एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्षको हैसियतमा रहने निश्चित भइसकेको छ । दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी मिलाउन पहिलो नम्बरको वरीयता परिवर्तन हुने गरी अन्तरिम विधान बनाइएको छ ।
विधान प्रतिवेदनमा पार्टीका तर्फबाट हुने औपचारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने स्पष्ट पारिएको कार्यदलका नेताहरूले बताए । यस व्यवस्थाअनुसार पार्टीले जारी गर्ने सर्कुलर, कुनै संवैधानिक निकाय वा संस्थालाई पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गरिँदा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: स्वस्थ रहन कति घण्टा सुत्नु जरुरी छ, कुन उमेरकाले कति घण्टा सुत्ने ?
Next post: बुटवलस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा भिषण आगलागी